यी ५ नेपाली ब्याट्सम्यान – कसको नाममा कति अर्धशतक? (सूचीसहित)
काठमाडौं : नेपालमा क्रिकेट’प्रतिको समर्थकको साथ दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । नेपालले क्रिकेट खेल्न थालेको इति’हास धेरै पुरानो नभए पनि समर्थकको साथ भने उत्साप्रद छ ।
नेपालले सन् १९९६ मा पहिलो आधिकारिक अन्त’र्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता खेलेको थियो । त्यो’ खेलेको टिम नै नेपालको पहिलो आधरिकारिक राष्ट्रिय टिम थियो । २५ वर्षीय क्रिकेट इतिहा’समा नेपालले टी-२० विश्वकपमा सहभागिताका
साथै एकदिवसीय क्रिकेटको मान्य’तासमेत पाइसकेको छ ।
यो बीचमा नेपाली क्रिकेटरले विभिन्न की’र्तिमानसमेत आफ्नो नाममा बनाइसकेका छन् । यसैबीच, आज हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा सर्वाधिक अर्ध’सतक बनाउने पाँच ब्या’ट्सम्यानको च’र्चा गर्दैछौँ ।
१. पारस खड्का : यो सूचीको शीर्ष स्थानमा पूर्व’कप्तान पारस खड्काको नाम आउँछ । उनले २०१४ देखि २०२० सम्म टी-२० मा सर्वाधिक पाँच अर्ध’शतक बनाएका छन् ।
साथै, पारसको नाममा टी-२० मा एक शतक पनि छ । उनी अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा शतक बनाउने पहिलो नेपाली ब्याट्स’म्यान पनि हुन् ।
पारसले हालसम्म ३३ टी-२० को ३२ इनिङ्स’मा १२८.०४ को स्ट्रा’इक रेटमा सर्वाधिक ७ सय ९९ रन बनाएका छन् । टी-२० मा पारसको उच्च स्कोर अवि’जित १०५ रन हो ।
२. विनोद भण्डारी : अन्त’र्राष्ट्रिय टी-२० मा नेपालका लागि सर्वाधिक अर्ध’शतक बनाउने मामलामा विके’टकीपर/ब्याट्स’म्यान विनोद भण्डारी दो’स्रो स्थानमा छन् । उनले २०१४ देखि हालसम्म टी-२० मा दुई अर्ध’शतक बनाएका छन् ।
विनोदले ३० म्या’चको २५ इनि’ङ्समा १०९.७४ को स्ट्राइ\_क रेटमा ३ सय ४ रन बनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा उनको उच्च स्कोर अवि’जित ५८ रन हो ।
३. ज्ञानेन्द्र मल्ल : यो सूचीको तेस्रो स्थानमा क’प्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको नाम आउँछ । उनले हालसम्म २७ टी-२० को २५ इनिङ्स खेलेका छन् । जसमा उनले एक श’तक र एक अर्धशतक बनाएका छन् ।
कप्तान मल्लले अहिलेसम्म १२१.७२ को स्ट्रा’इक रेटमा ५ सय ६६ रन बनाएका छन् । अन्त’र्राष्ट्रिय टी-२० मा उनको उच्च स्कोर १०७ रन हो ।
४. सन्दीप जोरा : नेपालका लागि टी-२० मा सर्वाधिक अर्धश’तक बनाउने सू’चीमा युवा ब्याट्स’म्यान सन्दीप जोराको नाम चौथो स्थानमा आउँछ । उनले हालसम्म टी-२० मा एक अर्ध’शतक बनाएका छन् ।
सन्दीपले ६ टी-२० मा १२१.६८ को स्ट्रा’इक रेटमा १०१ रन बनाएका छन् । टी-२० मा उनको उच्च स्कोर अवि’जित ५३ रन हो ।
५. सुवास खकुरेल : यो सूचीको पाँचौ स्थानमा वि’केटकीपर/ब्याट्स’म्यान सुवास खकुरेलको नाम आउँछ । उनले २०१४ देखि २०१५ सम्म टी-२० म्याच खेल्ने मौका पाएका थिए ।
सुवासले पनि अन्त्र्रा’ष्ट्रिय टी-२० मा एक अर्ध’शतक बनाएका छन् । उनले ८ म्याचमा ८०.५७ को स्ट्राइक रेटमा १ सय १२ रन बनाएका छन् । टी-२० मा सुवासको उच्च स्कोर ५६ रन हो । बझाङ न्युज बाट
२०७७ चैत्र ४, बुधबार २२:०८ गते 1 Minute 581 Views